महिलालाई यौनचाहना बढी कसरि हुन्छ ?
Home स्वास्थ्य महिलालाई यौनचाहना बढी कसरि हुन्छ ?
गर्भधारणको चाहाना भएका तर बच्चा नभएर तनावमा परेकाहरुका लागि खुसीको खवर छ । हालै गरिएको एक अध्यनले महिलाको मुड अनुसार उनीहरुको प्रजनन क्षमता हुने देखाएको छ ।
अमेरिकी प्रस्तावमा रुसद्वारा ‘भिटो’ प्रयोग
मलिना र मनिषको केमेष्ट्री
Copyright © 2018, Diamond Media & Advertising. Email: [email protected]ntipur.com